Tag bas iyo tareen
Tikidka bulshada waxaad raaci kartaa baska, S-Bahn, RE-Bahn, RE-Bahn, taraam iyo kann dhulka hoostiisa ee Ennepe-Ruhr-Kreis (EN-Kreis). Kuwaas waxaa ka mid ah magaalooyinka Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter (Ruhr) iyo Witten.
Qaado ugu badnaan 3 carruur ah oo bilaash ah: Isniinta - Jimco laga bilaabo 19.00, Sabtida iyo Axadda iyo 24.12. iyo 31.12.
. Qiimaha: 37,80 € / bishii Heerka qiimaha: PK
Codsiga Xafiiska Daryeelka Bulshada (Stadt Sprockhövel - Rathaus, Rathausplatz 4, 45549 Sprockhövel), Frau Nachtigall. Shahaadada tigidhka waxaa laga iibsan karaa tusaale ahaan dukaanka basaska ee baska Haßlinghausen.
tigidh oo dheeraad ah
Tigidhada dheeraadka ah waxaad ku safri kartaa VRR oo dhan gaadiidka dadweynaha, tusaale ahaan Bochum, Dortmund, Dusseldorf, Hagen, ...
Qiimaha: 3,40 € / safarkiiba | 4-tikit ah: 12,20 €
Gaadiidka iibka: VER, xarumaha macaamiisha, tikidhada lasii hor-iibsado, basaska badan iyo taraamyada iyo mashiinka tikidhada.
Tigidhada kali loo iibsado
Tigidhada hal safar kaliya ama dhowr safrood ayaa laga iibsan karaa mashiinnada tigidhada, xarunta safarka ee Deutsche Bahn iyo saldhigyo badan oo laga helo saldhigyada tareenka. Basaska waxaa sidoo kale suurtagal ah in si toos ah loo siiyo darawalka baska.
DIGNIIN: Tikidhada hal mar ayaa kaliya oo ansax ah haddii la joojiyay. Haddii aan taariikhda iyo waqtiga la daabicin tigidhka, tigidhka waa in lagu shaabadeeyaa tikidhka (taariikhda iyo waqtiga la daabacay). Fududeeyayaasha tigidhada waxaa laga heli karaa meheradaha, basaska iyo taraamada.
macluumaadka jadwalka VRR: http://efa.vrr.de
Macluumaadka jadwalkan Deutsche Bahn: http://reiseauskunft.bahn.de
Masaafada dheer Safar dheer
Safarro dheer, tusaale ahaan Berlin, Munich, Hamburg, ..., waxaa laga dhigi karaa kuwo wanaagsan oo leh tababarayaal masaafo dheer ah. Basaska fog-fog ayaa inta badan ka jaban safarrada tareenka.
Xeerarka aasaasiga ah ee wadada gaadiidka
Xeerarka Muhiimka ah ee Gaadiidka Wadooyinka
Safar nabadgelyo leh baaskiil - xeerarka ugu muhiimsan ee baaskiilada
Si aad u furato koonto, waxaad u baahan tahay cadeyn rasmi ah oo aqoonsi ah (ogolaansho joogitaan, dulqaad, ...) leh shaabad iyo saxiixa maamulka ajnabiga.
Bangiyada qaar iyo bangiyada kaydka ah waxay kaloo u baahan yihiin caddayn deganaansho.
Maareynta koontada ayaa laga bixiyaa kharash. Waxaa jira, tusaale ahaan, kharashka xisaabta ee Sparkasse Sprockhövel ee hadda 9.90 € / bishiiba. Koontada Volksbank waxaa laga helaa qiyaastii € 8.00 / bishiiba.
Iyada oo la adeegsanayo koontada aasaasiga ah iyo amarada joogtada ah ayaa la samayn karaa waxaana lacagta lagu bixin karaa gudaha iyo dibedda. Ma jirto khadad deyn ah. Koontada lama dhaafi karo xadka lacagta ku jirto.
Ardayda ilaa 27 sano jirka ah koontadu waa u bilaash. Hase yeeshee, heshiiska waxbarasho xirfadeedka waa in la tusiyaa Sparkasse.